Ihe Nduzi kachasị na Clomid na-emeso infertility na nwanyị
Ihe niile banyere Clomid
1. Kedu ihe bụ Clomid? Kedu ka o si arụ ọrụ? 2. Uwe na-eji
3. Uwe onu ogwu 4. Ihe dị mma
5.Clomid Ọkara ndụ 6. Mmetụta Na-ekpuchi Anya
7. Uru dị mma 8. Mkpuchi anya
9. Yiri maka ire ere 10. Na-ekpuchi ịzụlite ọmụmụ na ụmụ nwanyị- (Nchịkọta)
Kedu ihe bụ Clomid? Kedu ka o si arụ ọrụ?
A na-akpọkwa ebe a na-akpọ Clomiphene Clomid (50-41-9), bụ ọgwụ oral bụ nke a na-eji maka ịgwọ ụdị ụdị infertility. N'ụwa nile, a na-ere ya n'azụ ụdị aha dị iche iche dị ka Clomidac, clomene, Bemot, Clomi, clomifen, Beclom, Blesifen, Biogen, Blesifen, Chloramiphene, ClomHEXAL, et al. E kwadoro iji ya mee ihe ma kwadoro maka iji ọgwụ na 1967 na USA. Usoro nlekọta ahụike ọ bụla chọrọ ọgwụ a kasị dịrị nchebe ma dị irè dị ka Ndekọ Ahụike Dị Mkpa na Òtù Ahụ Ike Ụwa. Achọpụtara ya dị ka ọgwụ ntanetị. Uwe dị iche iche bụ otu n'ime ụzọ ndị ọzọ na-emepụta ụmụ nwanyị na-emepụtaghị ihe na-emepụta ụmụ nwanyị ndị na-adịghị na-emepụta ihe n'ihi na a na-emepụta ihe na nchịkwa.
Ọrụ ọgwụ na ụzọ nke nwere ahụ na-eche na ogo nke estrogen dị ntakịrị ma na-eme ka gọọmenti pituitary na-eme ka hormone LH ma ọ bụ ihe na-akpali akpali na-akpali akpali ma ọ bụ nke a na-amaghị dị ka FSH secretion. Ụdị FSH kachasị elu na-akpali ụmụ ovaries ka ha nwee otu ma ọ bụ karịa egg follicles emepụtara nke a ga-emepụta ma ọ bụ mepụta na ovulation. N'aka nke ọzọ, elu LH ọkwa na-akpali ọkpụkpụ.
Na-ekpuchi (50-41-9) abụwo onye nwere mmasị dị mma n'etiti ndị okenye kemgbe afọ iri ise nke ndị dọkịta na-ahụ maka ahụike ma ọ bụ OB-GYN na-edekarị clomiphene citrate tupu ha ekwuo otu ma ọ bụ abụọ iji lelee ọkachamara ọmụmụ maka nlekọta ọkachamara ọzọ. Ụfọdụ ndị ọkachamara na-emepụta ihe na-eweta clomiphene citrate. A dịghị enye ọgwụ maka ọgwụ ndị a maka ụmụ nwanyị ndị ovaries anaghị emepụta nsen kwesịrị ekwesị (onye bụ isi ma ọ bụ onye na-enwe mmekọahụ).
Ọnọdụ ụbụrụ na-ahụ maka ụbụrụ, ọbara ọgbụgba, ụbụrụ amorrhea, ụbụrụ nke abụọ, amịlịrọs na-emepụta ọgwụ, galactorrhoea, ọrịa polycystic ovia, Chiari-Frommel malady, ezughị ezu steroid, oligospermatism, nchọpụta nke nsogbu nke gonadotrophic na-arụ ọrụ glandocros. Mbempe nke clomiphene na-aba uru mgbe nile maka ndị na-agbalị ịmanye ime ụlọ ọrụ nke United Nations nwere nsogbu ọ bụla:
Ovulation na-adịghị mma: ọ na-esiri ike ịmalite ime otu akụkụ nke usoro ihe omume nke nwanyị na-enweghị isi na ọ gaghị enwe ike ozugbo ọ na-achọgharị. Ozugbo irè, ntinye nke clomiphene citrate kwesịrị iji mepụta nzaghachi nke osula na-enye ohere maka mmekọahụ ma ọ bụ intrauterine insemination.
"Ihe na-akpata nwoke" nsogbu nsogbu: mgbe e nwere ụbụrụ na-eme ka ahụ dị mma, nke ahụ ka ọkachamara gị nwere ike ịkọwa ụmụ ahụhụ iji gbasaa atụmanya nke ọnọdụ ahụike. A na-ejikarị emepụta clomiphene iji kwado ndokwa anụ ahụ nke ụmụ ahụhụ na nke nwanyị.
Enweghị ihe ọmụma: clomiphene citrate egosiwo na ọ dị irè na-arịwanye elu na ọnọdụ ụmụ anụmanụ na-eto eto bụ ndị nwere nhazi ọmụmụ ọmụmụ kpamkpam, n'agbanyeghị nke ahụ, mpaghara mpaghara nwere ịzụta ime.
A naghị adụ aro ka ọ rụọ ọrụ nlele anya nke ọma iji wepụ ihe ọ bụla dị mkpa na-eme ka ọ dịkwuo njọ ma ọ bụrụ na ịmalite ọhụụ ọ bụla.
A na-eji Clomifene ejikọta ya na nkà na ụzụ na-enye aka na-enyere ndị mmadụ aka ịgbatị ọganihu nke ụdị dị iche iche
A na-eji clomifene eme ihe na ọgwụgwọ eunuchidism dị ka onye ọzọ na-elekọta ọgwụ na-agbanwe ọgwụ hormone.
Uwe onu ogwu
Ụdị ihe mgbochi: Mpo NDC 0068-0226-30: 50 Mbadamba Mbadamba na katọn nke iri atọ
Mbadamba ụlọnga dị na mpaghara njikọ, na-acha ọcha, na-emetụta, na clomiphene na-ekwu okwu iri ise.
Mbadamba echekwa na 59-86 Celsius F (15-30 ° C). Ọta nke okpomọkụ, ọkụ, na oke mmiri mmiri, na ụlọ ahịa na ihe nkpuchi mechiri emechi.
Nlekọta na ịgwọ ndị na-aga maka nlekọta ahụike nke clomiphene kwesịrị ikwe ka nlekọta nke ndị dọkịta na-elekọta nlekọta ahụike ma ọ bụ ọrịa endocrine. A ghaghị ahọrọ ndị ọrịa maka ọgwụgwọ na clomiphene citrate naanị mgbe nchọpụta nyocha nchọpụta nlezianya. A ghaghị idepụta usoro nlekọta ahụike tupu oge eruo. Enwere ike ịhapụ ma ọ bụ jiri nlezianya mesoo ihe mgbaru ọsọ nke nlekọta ahụike tupu ị malite clomiphene citrate. Ebumnuche nke ọgwụgwọ kwesiri ịdị na-echekwa ihe ize ndụ ọ bụla ma kwuo ya na onye ọrịa na al. echebara echiche n'ime ihe nke ọnọdụ ahụike.
Ngwọta nke onye ọrịa a họọrọ ga-amalite, kọfị kọfị, iri ise mg kwa ụbọchị (1 mbadamba) maka ụbọchị ise. A ghaghị ikwubiga okwu ókè banyere ọgwụgwọ ahụ nanị na ndị ọrịa ahụ United Nations gị n'ụlọnga anaghị adaba na ntinye nke 50 mg clomiphene citrate. A na-enye ndụmọdụ magburu onwe ya ma ọ bụ ogologo usoro nlekọta ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na a na-enyo enyo dịka ọrịa na-ahụ maka ọrịa pituitary, dịka ndị ọrịa na ọrịa polycystic ovary.
A ghaghị ịtụle onye ọrịa ahụ ngwa ngwa iji wepụ ọnọdụ ahụike, ịbawanye njọ na-enwe mmekọahụ, ma ọ bụ usoro ikuku nke ọkpụkpụ n'etiti usoro ọgwụgwọ ọ bụla.
Ọ bụrụ na a na-emegharị ọbara ọgbụgba, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ụmụ nwanyị na-agbapụta ọbara ọgbụgba ahụ na-emeghị ihe ọ bụla na-eme tupu oge nlekọta ahụike, a ghaghị ịmalite ihe omume nke iri ise mg kwa ụbọchị maka ụbọchị ise nke oge ahụ. Enwere ike ịmalite nlekọta ahụike n'oge ọ bụla n'ime onye ọrụ United Nations ụlọ ọrụ na-ahụbeghị ụmụ nwanyị na-amụ nwa na-amụ nwa. Ozugbo usoro ọgwụ na-eme na ọgwụ a, ọ dịghị uru ọ bụla iji mụbaa ọgwụ ahụ na usoro ọgwụgwọ ndị na-aga n'ihu.
Ọ bụrụ na usoro nhazi adịghị ka ọ ga-eme ozugbo ọ bụ usoro nlekọta ahụike, usoro nke abụọ nke otu narị kwa ụbọchị (abụọ mbadamba mkpụrụ mg iri ise na-enye dịka otu dose ụbọchị) maka ụbọchị ise kwesịrị ịtụgharị. A pụkwara ịmalite ọmụmụ a dị ka ụbọchị iri atọ mgbe otu gara aga na-elezi anya mpaghara mpaghara iji wepụ ọnụnọ nke nne. Ịba ụba ma ọ bụ oge nlekọta ahụike n'akụkụ dị otu narị mg / ụbọchị maka ụbọchị ise adịghị adụ ọdụ.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrịa United Nations na-ahụ maka ọrụ ụlọ ọrụ na-eme atụmatụ ịchụpụ nwere ike ime nke a ozugbo usoro nlekọta ahụike. Ọ bụrụ na usoro ahụ adịghị eme mgbe ugboro atọ maka nlekọta ahụike, a gaghị enye ndụmọdụ banyere ọgwụgwọ ọzọ na clomiphene citrate na onye ọrịa kwesịrị ka a nyochaa ya ọzọ. Ọ bụrụ na nzaghachi atọ a na-edozi nwa, ọ bụ ezie na enwebeghị ike ịmụ nwa, a naghị enye ndụmọdụ banyere ọgwụgwọ ọzọ.
Ebe ọ bụ na clomiphene citrate na-eduga n'inweta ọtụtụ àkwá, ohere ị nwere ịmepụta ọtụtụ (ejima ma ọ bụ triplets ... mgbe ụfọdụ) na-arịgo elu. Iso otu ọkachamara ọkachamara na-ahụ maka ọmụmụ ihe ọmụma nke United Nations na-akọwa na ọgwụ kwesịrị ekwesị na-ebelata ohere nke ọtụtụ ọnụọgụ dị elu.
IVF bụ ụzọ ọzọ ị ga - esi belata ọnụ ọgụgụ ụmụ ọhụrụ site na nne maka ezigbo nne / nwa.
Mgbe ọ na-agụnye ịmalite usoro ihe omume ahụ, clomiphene citrate na-emeri nke ukwuu, na-eduga n'iwepụta ụmụ tozuru okè na ihe dịka iri asatọ nke ụmụ nwanyị United Nations na-eji ya eme ihe.
Nwee ọkara ndụ
Ọ bụrụ na ị kwụsịrị clomiphene citrate n'oge na-adịbeghị anya, enwere ohere na ị ga-enwe ike ịmepụta ọrụ dị iche iche maka ụbọchị (ma ọ bụ izu eleghi anya) ozugbo ị ga-eji ọgwụ ikpeazụ gị. Ihe ndị a nwere ike ime ka ị chee na clomiphene citrate na metabolites kwesịrị ka na-adị n'usoro ihe ị na-eme ma ọ bụ ihe ijuanya na ogologo oge tupu e kpochapụ ya. Iji hụ ma ogologo oge clomiphene citrate nwere ike ịnọgide na nhazi gị, ọ dị mkpa ka ị chee banyere iwepụ ọkara ndụ nke ise ruo ụbọchị asaa.
Nke ise a ruo ụbọchị asaa Na-ekpuchi ọkara ndụ egosi na ọ ga-ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu izu zuru oke mgbe ị ga-ewepụ mkpụrụedemede ise nke ọgwụ clomiphene citrate. N'ịmara na clomiphene na-edebi ụdị ndụ a dị ogologo, ọ ga-adị mma na nkọwa gị na ọ ka dị na usoro gị - ọ bụ ezie na ọ bụ izu ebe ọ bụ na ị ga-eji oge ikpeazụ gị. N'ikpeazụ, ọ ga - ewe ụbọchị iri abụọ na asaa.5 na 38.5 iji kpochapụ clomiphene citrate site na usoro gị kpamkpam; ihe dị ka izu anọ na isii
Akụkọ ndị ọzọ na-egosi na ọkara ndụ nke Clomid dị ihe dị ka izu abụọ (14 ụbọchị), nke pụtara na clomiphene citrate nwere ike ịnọ n'usoro ihe omume gị ruo otu izu iri na otu mgbe ị ga-eji ọgwụ ikpeazụ gị. Otutu ndi oru kwesiri icho anya na clomiphene choro ka ha na-agbasa n'etiti otu na ozo ato mgbe ha mesoro ha. Ekwesiri iburu n'uche na clomiphene citrate nwere otutu isomers: clomiphene (~ 62%) na zuclomiphene (~ 38%).
A na-ewepụta mkpụrụ ndụ nke clomiphene na-ekpochapụ ihe dị n'ime awa iri abụọ na anọ, ma nke ahụ bụ nke dị na zuclomiphene. A kpochapụrụ clomiphene ahụ n'ime izu ole na ole, ebe mpaghara zuclomiphene dị mkpa maka oge okwuchi nke mkpocha Clomid. Zuclomiphene yiri n'ime plasma ọma ozugbo otu ọnwa nke clomiphene citrate ọgwụgwụ na Chọpụta ichekwa na-kọrọ na adịghị ọcha excretion otu ọkara a iri na abụọ izu
Ọ bụ ezie na clomiphene na-anọgide na-agbagharị maka ihe dị ka anọ na iri na otu izu mgbe njiri ikpeazụ nke onye ọrụ, ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere ike iwepu ọgwụ ahụ n'otu oge ahụ. Ndị ọrụ ụfọdụ nwere ike iwepụ enclomiphene na isomers zuclomiphene ngwa ngwa karịa nkezi (n'ime izu isii), ebe ndị ọzọ kwesịrị ịnwe zuclomiphene na mgbasa ozi plasma ozugbo izu isii. A pụrụ ịkọwa ọdịiche dị n'etiti onye na-agba ọsọ nke clomiphene site na mgbanwe dị iche iche dị ka ihe onye ọ bụla, usoro ogwu, na okwu nlekọta.
Ihe otu onye
Ụmụ nwanyị abụọ nwere ike, n'otu oge ahụ, na-ede 50 mg clomiphene maka ụbọchị ise na-esote n'usoro oge ha na-agba ọsọ. Ka o sina dị, onye ọrụ nwere ike iwepu ọgwụ karịa ngwa ngwa. Ihe nile dabere na ike mmadu. Maka ụfọdụ ndị ọrụ, ọgwụ ahụ nwere ike ịnọgide na-arụsi ọrụ ike ruo ogologo oge karịa ndị ọzọ, ọgwụ ahụ ga-arahụ n'ime oge dị mkpirikpi.
Genetics: akwụkwọ gbasara ahụike na-enye echiche na clomiphene na-enweta nkwonkwo ụbụrụ na-esi ike. Ọ bụ ezie na ụzọ ndị dị n'ime ime ihe ndị dị na ya bụ ndị a na-adịghị ahụkebe maka ya na-adịghị elu, otu ọwa kweere na ọ ga-arụ ọrụ siri ike bụ nke CYP2D6 (P450 2D6 cytochrome).
Mmetụta Na-ekpuchi Anya
Ọtụtụ n'ime ọgwụ ndị ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile nwere ihe ọma na ọdịda ha dabere n'otú ị si eji ya. Dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ejighị ya eme ihe, maọbụ ọ bụrụ na ọ dị njọ, Clomid nwere ike itinye ndị ọrụ n'ihe ize ndụ nke ịmepụta ọtụtụ mmetụta. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ Mmetụta mmetụta dị mma nke bụ nkịtị ma nwee ike ịkwụsị n'ime obere oge. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịnata mmetụta ndị dị elu karị karịa mgbe dọkịta gị nyere iwu. Mmetụta ndị dị n'etiti ndị Clomid gụnyere;
Obi ebere, ihe mgbu, na nkasi obi
Ọrịa na-egbu egbu na eriri afọ
Otú ọ dị, enwere mmetụta dị egwu, ma ha na-adabere na otu ị ga - esi jiri ọgwụ. N'aka nke ọzọ, usoro ahụ mmadụ bụ ihe nchọpụta dị ịrịba ama nke ihe ị na-enweta mgbe ị nwụsịrị Clomid. Ụfọdụ ndị mmadụ ga-enwe mmetụta ndị siri ike ọ bụla ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-agbaso usoro ọgwụgwọ ma ọ bụ dị ala. Ọ bụ ya mere anyị ji enye ndị ahịa anyị ndụmọdụ mgbe nile tupu ha amalite ịṅụ ọgwụ a. Ọ bụrụ na ịnweta otu n'ime nsogbu ndị a, ị ga-achọ nlekọta ahụike ozugbo;
I kwesịkwara ịcheta na ọ bụrụ na ihe na-ezighị ezi, Clomid nwere ike iduga otutu ime. E nwere ohere dị elu na ị nwere ike ime ime mgbe ị na-eji ngwaahịa a, yana banyere 7% na ị ga-ejima ejiri na 0.5% ohere na ị ga-enweta triplets ma ọ bụ iwu dị elu. Ọ bụ ihe amamihe dị na ị ga-ebu ụzọ gwa dọkịta gị okwu, kwurịta ihe ize ndụ ahụ, ma kpebiekwa ma ọ bụrụ na ị ruru eru iburu ejima ma ọ bụ ọtụtụ. Ọ bụrụ na ị dịbeghị njikere ime ime, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịbanye nlekota anya.
Tupu ị na-eji Clomid, jide n'aka na ị na-adịghị ahụ nfụkasị ma ọ bụ ịdị na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla. Ị nwere ike ịkọrọ dọkịta gị ozugbo ka onye ọkachamara nyere gị ndụmọdụ ma ịkwesịrị iji ya. N'ụzọ dị otú a, ịnwere ike izere itinye onwe gị n'ihe ize ndụ nke ịnweta ụdị mmetụta ọ bụla a. Ọzọkwa, jide n'aka na ị na-agbaso usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro.
Uru dị mma
Maka ndị inyom na-eji ngwaahịa a eme ihe n'ụzọ ziri ezi ma ha anaghị ele ya anya, enwere uru dị iche iche na-atụ anya ya. Jide n'aka na ị gụnyere dọkịta gị tupu mgbe ahụ, mgbe, na mgbe ọ gwụsịrị ihe ejiji Clomid gị ka ị nwee ike kachasị Uru dị mma. Nkpu uwe na-enye ọtụtụ ọrụ maka ndị ọrụ ndị dị ka ndị a;
Ọ na - efu oke - nke a bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma maka ịgwọ infertility. Ọnụ ego nke Clomid tụnyere ihe ndị ọzọ dịka IVF enweghị atụ. Ọ abiawo dịka onye na-azọpụta ndụ maka ndị mmadụ na-emetụta nsogbu ọmụmụ na-enweghị isi ma enweghị ọgwụgwọ n'ihi ụkọ ego. Ihe ndị ọrụ na-esi na ya pụta karịa uru ego eji.
Ọ bụ ọgwụ a na-eji ekwu okwu - ọgwụgwọ ọnụ bụ nnọọ ihe dị mfe ma na-abịa n'oge kachasị ihe mgbu. Nke a adịghị ka injections ebe ndị ọrụ ga-etinye nsị n'ahụ ha dum, nke nwere ike ịba ụba. Nchachi bụ otu n'ime ọgwụgwọ ịzụ ụmụ na-azụghị ụmụ nwanyị na nsogbu ndị dị otú a.
Onye na-elekọta ya nwere ike ịkọwa ya - ozi ọma ahụ bụ na ị gaghị aga ileta ọkachamara ịmụ nwa iji nweta ọgwụ ọgwụ. Nke a na-eme ka ahụ dịkwuo mma karị, karịsịa ma ọ bụrụ na ị maghị ọkachamara n'ihe ọmụmụ ọ bụla dị nso gị. Ọ bụ onye nchekwa oge, akụkụ kachasị mma bụ na ọ dị mma iji ya mee ihe ma ọ bụrụhaala na ị na-agbaso ntụziaka a chọrọ.
Na - enwe mmetụta dị ole na ole - ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, Clomid nwere ole na ole na enweghị mmetụta ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nweta ihe ọ bụla, ha bụ nanị ndị dị nwayọọ ga-apụ n'oge na-adịghị anya mgbe ha kwụsịrị iji ya eme ihe ma ọ bụ mgbe ahụ gị na-ejikarị mmetụta ahụ eme ihe. Nakwa, cheta ịzụta ọgwụ si n'aka onye na-emepụta ihe ma ọ bụ onye na-ebu ngwaahịa iji hụ na ị ga-enweta ngwaahịa maka mma nsonaazụ Clomid.
Ngwaahịa a enwetawo ọtụtụ nyocha na ntụle dị mma site n'aka ndị jiri ya na mbụ. Ọtụtụ ndị na-eji ya ekwu na ha nwetara ngwa ngwa Ihe dị mma, o jukwara ha anya n'otú ngwaahịa si meghachi omume n'ahụ ha. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị inyom kwuru na ha ahapụwo oge ha mgbe ndị ọzọ na-amalite usoro oge na-agaghị enwe ike ịmalite, ma nke ahụ bụ ruo mgbe ha mụtara banyere ọgwụ a dị egwu. Ọzọkwa, ihe ka ọtụtụ n'ime ha nwetara nsonaazụ n'ime ọnwa atọ mgbe e jiri ya.
Ụfọdụ n'ime ha mere mkpesa banyere isi ọwụwa, ọgbụgbọ, afọ ọsịsa, na ịgba agbọ ma ọtụtụ n'ime ndị kwupụtara n'ezie na ha na-aṅụbiga ọgwụ ọjọọ na mmetụta dị iche iche kwụsịrị ozugbo ha kwusịrị ya. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị ọrụ na-eme mkpesa na ha nwere ajọ ahụmahụ na Clomid ekwupụtawo na ha ji ọgwụ ahụ eme ihe n'enweghi nlele ahụike. Ọ bụ ihe dị mma maka ngwaahịa ọgwụ iji nweta mmeghachi omume dị iche iche na nyocha site n'aka ndị ọrụ dị iche iche. N'ozuzu, Clomid bụ ọgwụ magburu onwe ya maka ịgwọ ụmụ nwanyị na-amaghị nwa. Ihe dị mma bụ na ọ gaghị adị mkpa ka ị na-emegharị ahụ mgbe niile n'ihi na ọ bụ ọgwụ ọnụ. Ị malite ịmịpụta ihe ndị ahụ n'ime oge dị mkpirikpi ọbụna ụfọdụ ndị ọrụ na-akọ na ị ga-atụrụ ime mgbe naanị ọnwa atọ nke usoro ọgwụgwọ.
Ntuzi kachasị na Testosterone decanoate maka Bodybuilding(Na-abanye na ihe nchọgharị ọhụrụ)
Yiri maka ire ere
Ugbu a na dọkịta gị enyefela gị ọgwụ ahụ, ọ bụ ihe dị mma ịchọta obi ụtọ ma gbasie ike iji nwalee ya. Nke a nwere ike iduga gị ịzụta ya site n'aka onye mbụ na-ere ahịa nke na-abịa n'ụzọ gị, nke ahụ bụ nnukwu mmejọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta Clomid, ị ghaghị ịkpachara anya iji hụ na ị na-enweta ya n'aka onye a tụkwasịrị obi Onye na-edozi ígwè nakwa ka ị ghara ịdaba ọnyà scammers. Enweela ụba ngwa maka ngwaahịa a, nke mere ka ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ere ahịa na-arị elu ma na-azọrọ na ha na-ere ya. Ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya, ị ga-ejedebe itinye ego gị n'ọtụtụ ihe na-enweghị ike inye gị ihe ị na-achọ. Ọzọkwa, ị nwere ike Zụrụ Clomid ntụ ntụ nke ahụ adịghị mma maka oriri, nke ga-ewetara gị nsogbu na nhụjuanya karịa ka ị na-emebu.
Were oge gị ma chọọ onye na-azụ Clomid na i nwere ike ịtụkwasị obi. Ịzụ Clomid n'Ịntanet na-enye gị mgbasa ozi nke ịchọrọ iji nweta ihe ziri ezi. Lelee nyocha n'Ịntanet ma chọpụta ihe ndị ọzọ ndị zụrụ ngwaahịa ndị ahụ na-ere maka ngwaahịa ahụ. I nwekwara ike maka ndụmọdụ sitere n'aka enyi ma ọ bụ onye ikwu gị na ị maara na ejila ngwaahịa a tupu ha ahapụkwa ha ka ha zoo gị na ndị na-ahụ maka ngwaahịa ha. Ọnụ na-akwụkwa ụgwọ mgbe ị na-achọ Yiri maka ire ere ma ọ bụrụ na atụmatụ mkpuchi gị na-akwụ ụgwọ ahụ. Ikwesighi ikwe ka onwe gi buru ibu ma kama, mee nchoputa, ghota onu ugwo ahia ma gaa onye ire ahia nke kachasi ego.
Mkpụrụ ọgwụ bụ ihe na-emetụ n'ahụ, ị ​​ga-ejikwa ya kpọrọ ihe. Adịla ngwa ngwa na nkwalite mbụ nke na-abịa n'ụzọ gị ma kama, chọọ mma. Ozi ọma ahụ bụ na anyị bụ ndị ahịa kachasị mma Clomid n'ógbè ahụ. Ị nwere ike ime ka usoro gị dị mfe site n'ekwentị gị, anyị ga-anapụta ya na ọnụ ụzọ gị. Ahịa anyị dịkwa ezigbo mma, ị nwere ike zụta Clomid na nnukwu site na ebe nrụọrụ weebụ enyi anyị. Nye anyị oku mgbe ọ bụla ị nwere ajụjụ maọbụ mkpa enyemaka na ịme iwu gị. Umu oku anyi na emeghe 24 / 7.
Na-ekpuchi ịzụlite ọmụmụ na ụmụ nwanyị- (Nchịkọta)
Uwe dị ọcha na-egosi na ọ dị oke irè mgbe ọ na-abịa n'ịgwọ nsogbu nsogbu ọmụmụ na ụmụ nwanyị. Ọ na-arụ ọrụ site n'ime ka ahụ chee na etiti afọ nke estrogen dị ala karịa na ha bụ n'ezie, nke na-eme ka gọọmenti na-eme ka ahụ dịkwuo elu na-akpali akpali. Nke a na - akpali ovary ịmepụta ovum ma ọ bụ ova, onye ọrụ ahụ nwere ike ime ime mgbe ọ na - azụ nwa. Ọ bụ ụkpụrụ doro anya, ọgwụ ahụ arụkwara ọtụtụ mmadụ ndị were oge ha ịchọ ịchọ Clomid kwesịrị ekwesị (50-41-9) ma mee ya dika o kwesiri. Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu nsogbu metụtara ọmụmụ, gbalịa itinye aka na ngwaahịa a ma nwee ọṅụ na ya.
Otú ọ dị, jide n'aka na ị gụnyere dọkịta gị n'ozuzu usoro usoro maka usoro kachasị elu. Ekwula oge ịgwa gị ọgwụ ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta ọganihu dị elu maọbụ ọ bụrụ na ọgwụ ọ bụla nke ọgwụ ọ bụla na-enye gị nsogbu. Dịkwa ka a na-akpọ physic gị ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta dị njọ tupu ọnọdụ ahụ adị njọ.
Joham, EE, Teede, HJ, Ranasinha, S., Zoungas, S., & Boyle, J. (2015). Umu omumu nke infertility na ojiji nke mmekota umu nwanyi ndi nwere nsogbu polycystic ovary syndrome: ihe omuma sitere na otu ndi otu ndi otu ndi agha. Akwụkwọ akụkọ banyere ahụ ike ụmụ nwanyị, 24(4), 299-307.
Berger, MH, Messore, M., Pastuszak, AW, & Ramasamy, R. (2016). Njikọ n'etiti infertility na mmekorita nwoke na nwanyi. Nyocha ịzụ ụmụ anụmanụ, 4(4), 353-365.